Imbeko 20i: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Imbeko 20i: Iphrimiyamu entsha yohlobo lwebhrendi
Imbeko inezinto ezimbalwa zokuphehlelelwa ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, nangona uphawu lwaseTshayina luthabatha isantya. Kuba kancinci kancinci iifowuni ezintsha ziqala ukufika kwelakhe icala. Ngoku lithuba leNhlonipho 20i, ethe thaca ngokusemthethweni e-China, apho sele ikwazile ukuyigcina, njengoko sele ifundiwe. Yeyona smartphone intsha yohlobo lweprimiyamu yohlobo lwebhsayithi.
Okwangoku asazi ukuba le fowuni izakuqaliswa nini kwilizwe liphela, nangona kulindeleke ukuba le Mbeko 20i izakubanayo ngaphandle kwe China. Kodwa musa ukuyilahla ukuba izakufika linelinye igama, njengoko kwenzekile kwezinye iifowuni zorhwebo ukuza kuthi ga ngoku.
Kwinqanaba loyilo sinokubona ukuba ifowuni ilandela iindlela zentengiso, ukongeza ekuboneni into esele siyibona kakhulu kwintengiso. Isikrini esinotshi emile njengokwehla kwamanzi, ngasemva sinekhamera kathathu. Ukongeza, uphawu luzinikele kwimibala yegradient eyenziwe nguHuawei kwimfashini kunyaka ophelileyo.
IHuawei P30 Lite ngoku isemthethweni
1 Ukubalulwa kwe-Honor 20i
Ukubalulwa kwe-Honor 20i
Ngokweenkcukacha zayo, siyabona ukuba uphawu lwaseTshayina luthathile ingqalelo kwinqanaba langoku eliphakathi kwi-Android. Ukusukela ukwaziswa kweekhamera ezininzi, ngaphandle kwamathandabuzo yenye yamandla kule fowuni. Ngokuyinxalenye, uyabona njengenguqulelo yeP30 Lite. Le yinkcazo ye-Honor 20i:
IsikriniI-6,21 intshi nge-FullHD + isisombululo 2.340 x 1.080 kunye ne-19,5: 9 ratio
Inkqubo: IKirn 710F
Ukugcina ngaphakathi: 64/128/256 GB (Iyandiswa ifike kwi-512 GB nge-MicroSD)
Ikhamera esemva: 24 MP kunye nokuvula f / 1.8 + 8 MP ngokuvula f / 2.4 + 2 MP ngokuvula f / 2.4
Ikhamera yangaphambili: 32 MP ngokuvula f / 2.0
Inkqubo yokusebenzaI-Android 9 Pie ene-EMUI 9
Ibhetri: 3.400 mAh ngetshaja ye-10W
Conectividad4G, i-WiFi 802.11 a / c, iMicroUSB, iJack 3,5mm, iBluetooth,
abanye: Umfundi ongasemva weminwe, Ukuvula ubuso, iGPU Turbo
UbukhuluUbukhulu: 154,8 x 73,64 x 7,95 mm
Inokukhumbuza abaninzi ukuba Imbeko ye-10 iLite, inyani kukuba banezinto ezifanayo. Nangona kunjalo, uphawu lwaseTshayina lwazisa iikhamera ezintathu zangasemva kwifowuni. Ezinye iikhamera ngokungathandabuzekiyo eyona nto iphambili kuyo, kuba zikushiya uneemvakalelo ezintle. Zombini iikhamera zangaphambili nezingaphambili, apho ikhethe khona inzwa ye-32 MP. Ngale ndlela bayakhokela kwiXiaomi, efika ngemodeli enekhamera yangaphambili ye-32 MP ekupheleni kwenyanga.
Iikhamera zale Honor 20i zinikwe amandla yiArtificial Intelligence. Yintoni eya kusinceda ekufumaneni izigcawu, ukongeza kwiziphumo ezahlukeneyo kwiifoto. Yintoni egqithisile, ifowuni ifika ngeGPU Turbo 2.0, Inguqulelo entsha yale software, esiyibona kwiifowuni zebrendi kwaye inceda ukusebenza okungcono xa udlala imidlalo.
Sifumana iinguqulelo ezininzi zale Honor 20i ngokwe-RAM kunye nendawo yokugcina. Umdibaniso abasebenzisi abaya kukwazi ukukhetha kuwo: 4GB / 128GB, 6GB / 64GB kunye ne6GB / 256GB. Ubuncinci ngokwewebhusayithi yeVmall e China, apho izakwaziswa khona kule veki, nge-18 ka-Epreli. Nangona kungekho lwazi ukuza kuthi ga ngoku malunga nokusungulwa kwesixhobo okwenziwa kumazwe aphesheya.
Asinayo idatha kumaxabiso eya kuba nayo nganye kwezi nguqulelo eTshayina. Nangona ifowuni ifika ezivenkileni kule veki, ukuze kwiintsuku nje ezimbalwa sibe nayo yonke idatha kuyo. Sinethemba lokuva okungakumbi kule veki malunga nokusungulwa kwale fowuni kwilizwe liphela. Kuba umgaqo uboniswa njengokhetho olulungileyo kwicandelo lawo.
Musa ukuyikhupha loo nto hit kwimarike yaseSpain ngelinye ixesha kule ntwasahlobo. Nangona kunokwenzeka ukuba yenze njalo ngegama elahlukileyo, njengoko sele yenzekile nezinye iifowuni zenkampani. Ngayiphi na imeko, sinethemba lokufumana ulwazi malunga nale Honor 20i kungekudala kwaye sinokulindela ntoni kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Imbeko 20i: Iphrimiyamu entsha yohlobo lwebhrendi
UGoogle ubhengeza into entsha eza ngoMeyi 7: isenokuba yiPixel 3a duo
I-Galaxy A2 Core: I-Samsung entsha ene-Android Go